Daawo: C/xakiin cameey madaxweyne ku xigeenka puntland oo garoowe ku qaabilay wafdi ka socda jarmalka – Kismaayo24 News Agency
by Tifaftiraha K24 30th August 2017 041
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ahna kusimaha Madaxweynaha Eng. Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey ayaa maanta 30 August 2017 qasriga Madaxtooyada Garoowe ku qaabilay wefti uu hogaaminayo safiirka dalka Jarmalka u fadhiya Soomaaliya Mr. Markus Bollmohr.
Kulanka ayaa waxaa Madaxweyna kuwehelinaayey masuuliyiin ka tirsan goloyaasha maamulka Puntland iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland, waxaana lagaga arrinsaday kulankani arrimo ay kamid ahaayeen adkaynta xidhiidh ka labada dhinac iyo mashaariicaha horumarineed ee dalka Jarmalku ka fulliyo Puntland.
Madaxweyne kuxigeenka untland ahna kusimaha Madaxweynaha ayaa ugu horayn weftigani kusoo dhoweeyey qasriga Madaxtooyada Garoowe, waxaana uu kusimaha Madaxweynuhu tilmaamay inay tahay muhiim in layska kaashado sidii loo xoojin lahaa loona wanaajin lahaa xidhiidhka wanaagsan ee ka dhexeeya Puntland iyo dalka Jarmalka, taasi oo suura gelin karta in uu sii wanaagsanaado xidhiidhka wanaagsan ee ka dhexeeya hadda labada dhinac.
Degdeg: Ciidamo Itoobiyaan ah oo laga qaaday Degmada Baardheere oo Maanta gaaray Magaalada Kismaayo.
Yuusuf Garaad oo la kulmay Madaxweynaha Seychelles Danny Faure, Maxayse ka wada hadleen?